Yeremia kaa ne haw (1-4)
Yehowa maa no mmuae (5-17)
12 O Yehowa, sɛ meka m’asɛm kyerɛ wo a, wubu atɛn wɔ trenee mu.+Sɛ mede me nsɛm dan wo a, wudi ma me. Ɛnde adɛn nti na esi abɔnefo yiye?+Na adɛn nti na nkontompofo ho adwo wɔn? 2 Woadua wɔn ama wɔagye ntini. Wɔanyin asow aba. Wɔde wɔn ano bɔ wo din daa, nanso wɔn adwene* de, atwe afi wo ho koraa.+ 3 Nanso wo, Yehowa, wunim me yiye;+ wuhu me.Woahwehwɛ me koma mu, na woahu sɛ edi mu wɔ w’anim.+ Yiyi wɔn gyina nkyɛn mmaako mmaako te sɛ nguan a wɔrekokum wɔn,Na hyira wɔn so ma ɛda a wobekum wɔn no.* 4 Asaase no bɛsɛe akosi da bɛn?Na asaase biara so wura bɛhyew* akosi da bɛn?+ Wɔn a wɔte so no bɔne nti,Mmoa ne nnomaa nyinaa ayera. Na wɔka sɛ: “Ɔrenhu nea ɛbɛto yɛn.” 5 Wɔn a wɔnam fam mpo na wo ne wɔn retu mmirika a woabrɛ yi,Ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na woatumi ne apɔnkɔ atu mmirika?+ Asomdwoe asaase so mpo na ɛyɛ wo sɛ wowɔ akokoduru yi,Ɛnde wokɔfa Yordan kwaebirentuw mu a, dɛn na wobɛyɛ? 6 W’ankasa wo nuanom, wo ara wo papa fifo mpoAtwa wo nkontompo.+ Wɔteɛm denneennen gu wo so. Sɛ wɔka nsɛm a ɛyɛ dɛ kyerɛ wo mpo a,Nnye wɔn nni. 7 “Magyaw me fi hɔ;+ mapo m’agyapade.+ Mede nea medɔ no paa no* ahyɛ n’atamfo nsa.+ 8 M’agyapade abɛyɛ sɛ kwae mu gyata wɔ me so. Wabobom agu me so. Ɛno nti metan no. 9 M’agyapade te sɛ ɔkɔre a ne ho kɔla dɔɔso;Akɔre foforo kotwa ne ho hyia ne no ko.+ Wuram mmoa nyinaa, mommra, mummehyia;Mommra mmedidi.+ 10 Nguanhwɛfo bebree asɛe me bobefuw;*+Wɔatiatia m’asaase so, me kyɛfa no.+ Wɔama m’asaase, me kyɛfa no, adan sare pradadaa. 11 Me kyɛfa no adan amamfo. Atwintwam;*Ada mpan wɔ m’anim.+ Wɔama asaase no nyinaa adan amamfo,Nanso ɛmfa obiara ho.+ 12 Asɛefo aba sare so akwan* no nyinaa so,Efisɛ Yehowa sekan resɛe ade afi asaase no ano akosi ano noho.+ Asomdwoe biara nni hɔ mma obiara.* 13 Woduaa hwiit, nanso wɔatwa nsɔe.+ Wɔabrɛ wɔn ho ayɛ adwuma, nanso wɔannya so mfaso biara. Wɔn ani bewu wɔn nnɔbae ho,Yehowa abufuhyew nti.” 14 Nea Yehowa aka ni: “Nnipa abɔnefo a wɔte bɛn me a wɔde wɔn nsa aka agyapade a mede ama me man Israel sɛ wɔmfa no nyinaa,+ meretutu wɔn ase afi wɔn asaase so,+ na Yuda fi nso, metu wɔn ase afi wɔn mu. 15 Nanso sɛ mitu wɔn ase wie a, mɛsan ahu wɔn mmɔbɔ, na masan de obiara aba n’agyapade ne n’asaase so.” 16 “Na sɛ wosua me man akwan yiye, na wɔde me din ka ntam sɛ, ‘Sɛ́ Yehowa te ase yi!’ sɛnea wɔkyerɛɛ me man ma wɔkaa Baal ntam no a, ɛnde wobenya tenabea wɔ me man mu. 17 Na sɛ wɔantie a, ɛnde me nso metutu saa ɔman no ase; metutu ase na masɛe no,” Yehowa na waka.+
^ Anaa “wɔn koma.” Nt., “asaabo.”
^ Anaa “hyira wɔn so ma okum da no.”
^ Anaa “nea me kra dɔ no paa no.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Ɛredi awerɛhow.”
^ Anaa “akwan a asɛe.”